Fikradaha xisaabta ee lagu qiimeeyo Fasalka Afraad waxaa ka mid ah:
Muuji aqoon-u-yeelasho leh isku dhufasho iyo xaqiiqooyin kala-qaybin. Qiyaaso badeecadaha iyo isweydaarsiga tirooyin fara badan oo tiro badan adoo adeegsanaya isugeyn, jaangooyooyin iyo qiimeyn qiimeyn lagu sameynayo macquulnimada natiijooyinka. Xalliyaan dhibaatooyinka dhabta ah ee dhabta ah iyo dhibaatooyinka xisaabta ee u baahan isticmaalka isku-darka, kala-goynta iyo isku dhufashada tirooyin dhan oo godad badan leh. Matalo oo isbarbar dhig jajabka iyo jajab tobanlaha dhabta ah iyo xaaladaha xisaabta Akhri oo qor jajab tobanle ereyo iyo astaamo; isticmaal qiimaha goobta si aad u sharaxdo jajab tobanle marka loo eego kumanaan, boqollaal, tobanaan, hal, tobnaad, boqollaal iyo kun meelood.
U adeegso isku dhufasho, kala qaybin iyo waxyaabo aan la aqoon si aad u metesho xaalad dhibaato jirta adigoo adeegsanaya jumlad lambar. Adeegso macnaha tirada, astaamaha isku dhufashada, iyo xiriirka ka dhexeeya isku dhufashada iyo qeybin si aad u heshid qiimeyaal aan la aqoon oo ka dhigaya weedhaha tirada kuwo run ah. Tusaale ahaan: Haddii $ 84 si siman loogu qaybsado koox carruur ah, xaddiga lacagta canug walba helo waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo la adeegsanayo lambarka jumlada 84 ÷ n = d.
Magaca, qeex, sooc oo sawir geesoolayaasha, oo ay ku jiraan isku mid ahaanta, midig, qummanaanta iyo saddexagalka ba'an iyo laba jibbaaran, leydi, trapezoid, rhombuses, barbarlogram iyo kites. Soo hel aagagga shaxannada joomatari iyo walxaha dunida dhabta ah ee loo qaybin karo qaabab afar gees leh.
Ururi, abaabulo, muujiyo oo fasiro xogta, oo ay ku jiraan xogta la soo ururiyay in muddo ah iyo xogta ay metelayso jajabka iyo jajab tobanlaha.